Isticmaalka daawada disha disha chromium ee diyaarinta alaabada dhoobada ah ee loo yaqaan 'pyrolysis of Polycarbosilane' maadama horudhac ah budada disha Chromium waxay kor u qaadi kartaa falcelinta dilaaca kombiyuutarada, kordhinta wax soo saarka dhoobada ee horudhaca ah, yareeynta qadka toosan ee horudhaca geedi socodka pyrolysis, iyo hagaajinta sifooyinka qalabka dhoobada.
ismiidaaminta tantalum waxay leedahay barxad sare oo adkeysi hooseysa, daxalka u adkeysata, heerkulka sare ee u adkeysiga qiijiinta iyo silikoonka, maadada matoorrada kaarboon waxay leedahay astaamo aad u fiican sida iswaafajin wanaagsan, sida sheyga shabakadda, khadadka iskuxirka isku-dhafan ee isku-dhafan, heerkulka sare ee iska caabinta qiijiinta, iwm. curiyaha kululeynta korontada, qeybta qeybaha qaabdhismeedka heerkulka sare iyo aaladaha elektaroonigga ah ， iyo cilmi baaris iyo codsi dheeri ah
Qaaciddada kiimikada ee CoSi2. Miisaanka molikalku waa 115.11. Madoow madoobaadka orthorhombic. Barta dhalaalida waa 1277 ℃, cufnaanta qaraabaduna waa 5.3. Waxaa lagu qayilaa 1200 ℃ oo dusha ka saaraa dusha sare;
Silicon (NiSi) waa austenitic (NiSi) alloy (1); waxaa loo adeegsadaa inay tahay sheyga taban ee thermocouple n-nooca. Xasiloonida heerkulka korontada ayaa ka wanaagsan tan E, J iyo lammaanaha nooca korontada ku shaqeeya.Niil silicon daawaha waa inaan lagu dhigin gaaska ay ku jirto baaruudda. Dhawaan, waxay ku taxan tahay nooc ka mid ah heerkulbeegga heer caalami ah.
Mg2Si waa xarunta kaliya ee xasilloon ee nidaamka bin Mg Si. Waxay leedahay astaamaha barta dhalaalaysa sare, adkaanta sare iyo modulus laastik sare. Waa farqiga cidhiidhiga n n nooca semiconductor. Waxay leedahay rajo codsi oo muhiim ah aaladaha optoelectronic, aaladaha elektarooniga ah, aaladaha tamarta, laser, wax soosaarka semiconductor, isgaarsiinta xakameynta heerkulka joogtada ah iyo dhinacyada kale.